Asizigqaje ngobu-Afrika - Bayede News
Home » Asizigqaje ngobu-Afrika
UKlopp unokuzithoba ngamava kaZidane
NAMUHLA (umhla zingama-25 kuNhlaba)wusuku olukhulu emlandweni wezwekazi i-Afrika ngoba yilapho kwahlangana khona imihlathi eyazanayo kwasungulwa inhlangano yobumbano lwama-Afrika yethiwa ngokuthi i-Organisation of African Unity (OAU) ngowe-1963 namuhla esiyaziwa nge-African Union (AU).
Lolu suku lwaqoshwa njengolokubungaza i-Afrika njengoba selwaziwa nge-Africa Day. Alugcini nje ngokugujwa kuleli zwekazi kodwa nasemazweni aphesheya kwezilwandle anabantu bakuleli zwekazi bayalwazisa ngoba yilapho ama-Afrika ezigqaja khona ngobuzwe bawo nokubungaza inkululeko eyazuzwa kuphunywa ngaphansi kombuso wamaKoloni.
Ukusungulwa kwenhlangano yobumbano lwamazwe ase-Afrika kwahlanganisa namazwe ayimihlambi eyalanayo ngaphansi kombono owodwa wokwakha izwekazi elibumbene, elinokuthula, nelikhululekile. Sigubha lolu suku nezindaba ezimnandi njengoba ngonyaka odlule kwabuyiselwa iMorocco ngaphansi kwe-African Union emuva kweminyaka engama-33 ingelona ilungu ngenxa yombango owawuthinta iWestern Sahara.
Kuningi okuhle osekwenzekile abaholi bangaphambilini e-Afrika ababenephupho lakho njengokuthi abantu ngokwehlukana kwabo bahlalisane ngokuthula bakubone nokubaluleka kwezwekazi.
Kwakuyisifiso sabaholi ababa ngamavulandlela ukubumbana kwe-Afrika ukuba abantu balo bathuthuke ngenzindlela ezihlukene kusuka kwezemfundo, ezempilo, ezenhlalakahle ukuze kufezeke iphupho lonyaka wezi-2063 le-Afrika ekhululekile. Naphezu kwenqubekelaphambili esiyenzekile, zisekhona izinselelo ezisabhekene nemibuso ezwenikazi.
Amanye amazwe asakhungethwe izimpi zombango, indlala, izifo, ububha nabaholi abangafuni ukuphuma ezikhundleni ababonakala beguqula imithethosisekelo yamazwe ukuze baqhubeke nokuphatha.
Sikhuluma nje akwaziwa mbhantshi kujiya ngesimo saseDemocratic Republic of Congo (DRC) emuva kwezikhathi eziningi uMengameli wakhona uMnu uJoseph Kabila ehlehlisa ukhetho. Yisimo esifanayo naseBurudi lapho uMengameli wakhona uPierre Nkurunziza ephoqile ukuba aphathe ihlandla lesithathu nakuba uMthethosisekelo wezwe ungakuvumi lokho. I-African Union ne-Eccowas kumele bakusukumele lokhu ngoba kulimaza isithunzi salezi zinhlangano nalokho ezikumele.
Abaholi abaphambana nenqubomgomo yalezi zinhlangano badicilela phansi imisebenzi yabaholi bangaphambilini njengoHaile Selassie wase-Ethiopia, uNkwame Nkrumah waseGhana, uJulius Mwalimu Nyerere waseTanzania, uKenneth Kaunda waseZambia, uSamora Machel waseMozambique, u-Agostinho Neto wase-Angola, noNelson Mandela wakuleli.
Yithina ngokuhlanganyela njengama-Afrika esiyophumelelisa iphupho lalezi zinsizwa ngaphandle kokuidinga usizo lwamazwe aseNtshonalanga. Kumele sisike iphethini kulaba baholi ababephilisana njengezingane zandawonye noma kwakukhona lapho babengaboni ngasolinye. Asisebenzise ukwehlukana kwethu ngobuzwe, amasiko, nangezilimi ukuqhakambisa ubuhle ne-Afrika nokukhombhisa umhlaba wonke ukuthi simunye. Lo muzwa akumele usifikele ngalesi sikhathi se-Africa Day kuphela, kepha kumele kube yiwo osibusayo nosifikisa empumelelweni.
Bayede News May 25, 2018